कोरियाबाट सञ्चालनमा रहेको पोर्नसाइटमा नेपाली जोडीको सयौं नांगो भिडियो – Rastriyapatrika
कोरियाबाट सञ्चालनमा रहेको पोर्नसाइटमा नेपाली जोडीको सयौं नांगो भिडियो
दक्षिण कोरियाबाट सञ्चालनमा रहेको देखिएको पोर्नसाइटमा नेपाली जोडीको नांगो भिडियो यतिखेर संसारभरका लागि इन्टरनेटमा ‘टाइमपास’ बनिरहेको छ ।
की नांगिनु भएको पनि छ बिचार गनुस् वर्वात होला रु तपाईंका भिडियो सार्वजनिक भएर संसारभर पुगेको हुन पनि सक्छ । हो, दक्षिण कोरियाबाट नेपाली चेलीकै बदनाम हुने गरी सञ्चालन भइरहेको एउटा पोर्नसाइटले संसारभरका नेपालीको नांगो भिडियो कलेक्सन गरेर यतिखेर हंगामा मच्चाइरहेको छ । कोरियाको साइटमा नेपाली यूवतीका सयौं नांगो भिडियो नेटमा देखिन थालेका छन् ।
काठमाडौँमा केही इन्टरनेट प्रदायकले यो साइटलाई ब्लक पनि गरेका छन् । गुगलमा उसले जहाँजहाँ आफ्नो साइट ब्लक भएको छ, त्यहाँ यो सफ्वेयर नै इन्स्टल गरेर हेर्न सकिनेसमेत बनाएको छ ।
चीनमा फेसबुक बन्द भएपनि १० डलर तिरेर सफ्टवेयर प्रयोग गरेर फेसबुक चोरेर चलाइएजस्तै गरी यो साइटले पनि बल्क भएको ठाउँमा पनि हेर्नसकिने बनाएको छ आफूलाई ।साइटमा एउटा भिडियो कम्तीमा ६ हजारले हेरेको पाइएको छ । कुनै पनि भिडियो यु टुवमा उपलब्ध छैन् । साइटमा नेपालका काठमाडौँ, पोखरा, धनगढी, हेटौँडा, नारायणगढका भिडियो पनि छन् ।
जसमा केटीको नाम र थर नै उल्लेख गरेर भिडियो अपलोड भएको प्रष्टै पाइन्छ ,जसले गर्दा समाजमा पछि गाह्रो पर्छ । मध्यरातिसम्म बुढासँग छिल्लिएर नांगै बसेर गफ गरेका कुराकानीदेखि ढोका थुनेर ब्वाइफ्रेन्डसँग भिडियो च्याट गर्दै नांगिएकी पोखराकी किशोरीको भिडियो कम्तीमा १ लाख ५५ हजारले हेरेका छन् ।
साइटले आफ्नो आचारसंहितामा भनेको छ, ‘हामीले यहाँ पोस्ट गरेका भिडियोहरु बिल्कुल सहमतिमा भएका कार्यमा सीमित छन् ।’
उसले बाल यौनदुराचार, बलात्कार, मानसिक शारीरिक त्रास देखाएर गरिने यौन दुव्र्यवहारको भिडियो नहालेको जनाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि घरको छतबाट तल्ला घर, पल्लाघरमा नुहाइरहेका सोझा छिमेकी महिलाका भिडियो पनि पोष्ट भएका छन् ।
साइटमा झन्डै चारसय भन्दा बढी भिडियो पोष्ट भएको पाइएको छ ।कतै तपाईंको पनि व्यक्तिगत जीवनमा यसले समस्या त पार्दैछैन ?
संसारभरमा हेरिएको ५८ हजार साइटमा परेको यो साइटले कतै ठूलै समस्या पो ल्याउँदैछ कि ? आफ्नै पति, प्रेमी, साथीसँग गरिएको यौनजन्य कार्यको विषयमा हेक्का राख्नु भएन भने समस्यामा पर्नु होला है । एउटा सानो गल्तीले कसैको जीवन बर्बाद नहोस् ।